I-Meltwater Buzz yeNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
IMeltwater Buzz yoLuntu lweNtengiso yezeNtlalontle
NgoMvulo, Juni 3, 2013 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
IMeltwater ibonelela ngesityebi Iziphumo eziqhutywa Iqonga lezentengiso yezeNtlalontle ithandwayo kwihlabathi jikelele, ngakumbi kumzi wobudlelwane boluntu.
Ukuhlakulela uluntu olomeleleyo lweshishini kwezentlalo kunye nezisombululo zentengiso yemithombo yeendaba eMeltwater ukwakha ii-brand, ukukhulisa abameli kunye nokuqhuba ingeniso. Izisombululo zentengiso yemithombo yeendaba eMeltwater zidibanisa esweni imithombo yeendaba ezinzulu kunye kubahlalutyi ngokuzibandakanya okusebenzayo kwezentlalo ukukunceda wenze imikhankaso yokuthengisa esebenzayo kunye nokwakha ubudlelwane obunzulu boluntu kuluntu olukhulu ukuhambisa imithombo yeendaba yokwenyani ye-ROI.
Iimpawu ezichazwe kwisiza seMeltwater:
Izisombululo zokujonga iMidiya yoLuntu -Fumana ukuqonda kumajelo asekuhlaleni ngendlela yokukhulisa ishishini lakho kunye nezisombululo zokujonga imithombo yeendaba zaseMeltwater. Chonga iindlela onokuthi uzisebenzise kwimikhankaso yakho yokuthengisa kwimithombo yeendaba. Qonda umthombo wezimvo zentlalo ukuphucula ukuphembelela ukufikelela kuluntu. Phanda uluvo olungemva kwezimvo zentlalo ukuze uhlengahlengise ithoni yomxholo wentengiso yakho. Ukujolisa kwintengiso yakho yemidiya yoluntu apho umyalezo wenkampani yakho unokufumana eyona traction. Izisombululo zokujonga imithombo yeendaba zaseMeltwater zikunceda ucofe ingxolo, ukuze ukwazi ukugxila kwiincoko zentlalo ezinikezela ngengqondo yokwenyani kunye nethuba.
Isicwangciso seendaba seNtlalo -Yandisa i-ROI yemithombo yeendaba ngokuseka isicwangciso-buchule sentengiso kwimidiya yoluntu ekuqondeni nzulu kweshishini. Qonda iimfuno zabaphulaphuli bakho ojolise kubo ngokubekwa kweliso kwimidiya yoluntu. Ukuphonononga amagqabantshintshi ngezentlalo ukumisela ukuba wena kunye nabantu okhuphisana nabo niyilungisa njani le mfuno. Hlalutya amajelo eendaba ezentlalo abantu bakho ekujoliswe kubo basebenzise kakhulu xa bethetha ngemveliso yakho ukwandisa ifuthe lakho ekuhlaleni. Yakha iqhinga losasazo lweendaba zentlalo elibonisa umahluko ophambili kwizisombululo zentengiso yeendaba eMeltwater yokunyusa i-ROI yemikhankaso yakho yokuthengisa.
Izisombululo zeMidiya yoLuntu -Khuthaza ukubandakanyeka okunzulu kwimithombo yeendaba zentlalo ukukhuthaza ukuhanjiswa kwegama. Impumelelo yentengiso yemidiya yoluntu isekwe kuthethathethwano lweendaba zosasazo. Ngokungafaniyo nentengiso yosasazo kunye nentengiso ethe ngqo, akwanelanga ukucwangcisa into oza kuyithetha noyenzayo, kuya kufuneka uqikelele ukuba uluntu lwakho luza kuphawula ntoni kwaye lwabelane ngalo. Kuya kufuneka ukhuthaze ukubandakanyeka kwimidiya yoluntu. Yomeleza ubudlelwane bakho nomthengi kunye noluntu ngokuzibandakanya ngakumbi egameni leempawu zakho. Guqula iincoko zibe ngabathengi kunye nabathengi babe ngabameli bezentengiso ngokuzibandakanya okunzulu kwimidiya yoluntu.
Uhlalutyo lweendaba kwimidiya -Linganisa impumelelo kwimikhankaso yakho yokuthengisa kwimithombo yeendaba neMeltwater kwimidiya yoluntu kubahlalutyi izisombululo. Ukucofa kunye nabalandeli abalibonisi ixabiso leshishini lephulo losasazo lwentlalo. Imithombo yeendaba yaseMeltwater kubahlalutyi Izisombululo zikunceda ukuba uqonde ukuba amaphulo akho azichaphazela njani iincoko zentlalo kunye nokuba ezo ngxoxo ziguqulela njani kwixabiso leshishini lokwenyani. Bonisa indlela yentengiso yemidiya yoluntu egcwalisa ngayo iinzame zakho zokuthengisa ngokwesiko. Yenza izigqibo ezisekwe kwinyani zokwandisa ukuthengisa kwimithombo yeendaba zentlalo kutyalo-mali ngokuhlaziya okungcono kwimidiya yoluntu.
tags: Amanzi onyibilikayoinyibilikisi yamanziuhlalutyo kwimidiya yoluntunxaxheba kwezentlaloizisombululo zentengiso kwimidiya yoluntuukubeka iliso kwimidiya yoluntuisicwangciso seendaba zoluntu
Kutheni ndithiyile iiAkhawunti eziQinisekisiweyo
Phinda ubuye kwi-Facebook kunye ne-AdRoll Retargeting